#Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay waalidiinta gabadhii yareyd ee Muqdisho lagu dilay - Get Latest News From Horn of Africa
#Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay waalidiinta gabadhii yareyd ee Muqdisho lagu dilay
By On Sep 19, 2018
Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa la kulmay waalidiinta gabar ardayad 9 sano jir aheyd oo shalay ku dhimatay is-rasaaseyn ka dhacday agagaarka Isbitaalka digfeer, degmada Hodon ee Magaalada Muqdisho.
Farmaajo ayaa u tacsiyadeeyey qoyska gabadha yar, isagoo u sheegay inuu aad uga xun yahay kana murugooday falkaas oo uu sheegay iney ku kaceen askar aan xilkas aheyn oo uu balan-qaaday in sharciga la horkeeni doono.
Qoyska ayaa uga Mahadceliyey Madaxweynaha iyo madaxda kale ee dalka sida ay uga fal celiyeen dilka loo geystay gabadhooda yar, waxayna sheegeen iney ku qanacsan yihiin jawaabta dowladu ka bixisay falkaas.
#Death Toll From Mogadishu Blasts Rises to 11
#Despite closing the border Kenya is making fresh efforts to…
Dhinaca kale, Ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay askar lagu eedeeyay dilka gabadhan oo ku lug lahaa israsaaseynta shalay ka dhacday Magaalada Muqdisho.
Hay’adaha amniga ayaa sheegay in la xiray afar askari kuwaasoo labo ka mida ay ka tirsan yihiin ilaalada Jen. Sheegow halka labada kale ay ilaalo u ahaayeen taliye kale oo ka tirsan ciidanka milateriga.
Xarunta CID-da ee Dembi baarista ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa lagu xiray askartan, waxaana la dhaqaajiyey baaris ku saabsan dilka gabadha yar oo naxdin weyn ku dhalisay bulshada Soomaaliyeed.
Deeqo Daahir Faarax oo aheyd ardayad 9 jir ah oo dhigan jirtay Dugsiga Hoyga Xamar ayey Baskii ay saarneyd rasaas ugu tagtay shalay xili uu ka soo celiyey iskuulka ka dib markii ay bartanka u galeen ciidamo isku rasaaseynayey agagaarka Isbitaalka Digfeer.
#Xulashaddii Ergeyga Qaramadda Midowbay Waa Dib uu soo…
13 hours ago 788,577
Maamulka Kismaayo oo u hanjabtay dadka baraha bulshadda ku…
14 hours ago 37,005
#Sarkaal ka tirsanaa Ciidanka Somaliland oo dhagax lagu…
14 hours ago 3,708
#Wasiir Goodax oo madaxda ku shirsan Nairobi ka dalbaday…
3 days ago 79,019
Prev Next 1 of 3,576
#Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qarax miino oo ka…
Jun 14, 2019 37,015
#Xildh: Rashiid oo xabsiga ladhigay…
Jun 14, 2019 7,900,014
#Haddii aan Sacuudiga iyo Imaaraadka ku…
Jun 13, 2019 78,598
#Guri Uu Sargaal Booliis ah Xoog ku…
Jun 13, 2019 78,615
Prev Next 1 of 3,575